I-Flyer - Isiseko Semivuzo - Uthando, Ubulili kunye neInternet
Eli phepha linikezela ukufikelela kwiFebhu YesiKhwama seReward esenza oko sikwenzayo. Le nguqulo yapapashwa ngoJulayi 2017.
Kwiziseko zoMvuzo sinikezela ngokulula ukuluqonda, ulwazi oluzimeleyo lwenzululwazi kuwo wonke umntu ngothando, isondo kunye ne-Intanethi. Nceda usebenzise kwaye wabelane ngencwadana yethu, kodwa samkele njengomthombo wayo. Sisebenzisa ilayisenisi yeCreative Commons CC-BY-ND.
Eli phepha-mvume livumela ukwabiwa ngokutsha, ukurhweba kunye nokungekho kwezorhwebo, ukuba nje idluliswa ingatshintshanga kwaye iphelele, ngetyala kuMvuzo weSiseko. Ukujonga itayitile yelayisensi, nceda ucofe Apha. Ukujonga ikhowudi yomthetho, nceda nqakraza Apha.
Cofa kwikhonkco ukukhuphela Iflyer yeSiseko soMvuzo…